Chrome က extension ကို Install
➥ URL ကိုကိုသွားပါ ⤓ Download
ဤသည် URL ကိုဘေးကင်းလုံခြုံပါ!
အခြား URL ကို Check
malware နဲ့ phishing စစ်။
ဝဘ်ဖြတ်ပြီးလုံခြုံတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အလားအလာရှိသောထိခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားရန် built ဒါကလုံခြုံရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကပိုလုံခြုံပြီးပိုလုံခြုံက်ဘ်ဆိုက်ဆီသို့တိုးတက်မှုအားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များဧည့်သည် '' ကွန်ပျူတာများပေါ်သို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတပ်ဆင်ပြီးကြောင်းကုဒ်ဆံ့, ဖြစ်စေအသုံးပြုသူတစ်ဦးသူတို့တရားဝင် software ကိုဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ပညာအတတ်မရှိဘဲနေကြသည်ထင်လာသောအခါ။ ဟက်ကာထို့နောက်အသုံးပြုသူများသည်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖို့ဒီ software ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကို Safe Browsing နည်းပညာလည်းအလားအလာစိတ်မချရသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကို web တို့ကိုစိစစ်ခြင်းနှင့်စိစစ်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များသူတို့ username နဲ့ password အတွက်စာရိုက်သို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်မျှဝေသို့အသုံးပြုသူများကိုလှည့်စားနိုင်အောင်တရားဝင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်။ တရားဝင်ဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစတိုးအယောင်ဆောင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကို phishing site များ၏ဘုံဥပမာဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကို malware ကိုဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်
အဆိုပါအသုံးအနှုန်း malware ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေဖို့ဒီဇိုင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတခုအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း။ ရောဂါကူးစက်ခံရမှုက်ဘ်ဆိုက်များပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ် user ရဲ့စက်နှင့်တိုက်ခိုက်မှုအခြားကွန်ပျူတာများကိုထိန်းချုပ်ယူအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏စက်ပေါ် malware များထည့်သွင်းပါ။ သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံ software ကို install လုပ်နေကြတယ်ထင်နှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူသတိထားမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာအသုံးပြုသူများကဒီ malware ကို download လုပ်ပါ။ အခွားသောအချိန်များ, malware များဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာမပါဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ malware ၏ဘုံအမျိုးအစားများ ransomware, spyware, ဗိုင်းရပ်စ်, worm, Trojan ဟာမြင်းများပါဝင်သည်။
malware အများအပြားအရပ်တွင်ဖုံးကွယ်နိုင်ပြီး, ကသူတို့ရဲ့ website သို့ကူးစက်ပါကကျွမ်းကျင်သူတွေထွက်တွက်ဆရန်ပင်အဘို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ညှိက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေ, ကျနော်တို့ကို web scan ကျနော်တို့ site တစ်ခုအားလျော့ထားပြီးညွှန်ပြကြောင်းအချက်ပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကို virtual စက်တွေကိုအသုံးပြုပါ။
ဤရွေ့ကားဟက်ကာများရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့ကို set up ပြီဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ ဤဆိုဒ်များတိုက်ရိုက် browser ကို exploit သို့မဟုတ်မကြာခဏအန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူပြကြောင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် software ကိုဆံ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာတိုက်ခိုက်မှုက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်ဤဆိုဒ်များခွဲခြားဤအပြုအမူ detect နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားကနေ, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသူများအဖို့, ၎င်းတို့၏ browser များ exploit စေခြင်းငှါက်ဘ်ဆိုက်များမှအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်မှတိုက်ခိုက်ခံရခဲ့ကြကြောင်းတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, site တစ်ခု၏စာမျက်နှာတစ်ခုတိုက်ခိုက်မှု site ကိုမှအသုံးပြုသူတစ်ဦးပြန်ညွှန်းကြောင်းကုဒ်ထည့်သွင်းရန်ညှိနိုင်းနိုင်ပါသည်။